Fivarotam-panafody: Ho an'ny mpampiasa anao ao amin'ny E-Commerce Bedrijf
Raha mpivarotra e-varotra dia tokony hijanona amin'ny fifaninanana. Waarom? Ny voalohany dia hanampy anao hanakatra ny firoboroboan'ny tsena. Fahatelo, ny mahatsara ny zava-misy dia mahasarika ny mpividy marketing marketing ary mazava ho azy fa manampy anao hifantoka amin'ny fifaninanana.
Nanao izany i Jason Adler, manam-pahaizana manokana Semalt Services Services, ny toro-hevitra momba ny fifandraisana misy eo aminao.
Manomboka mifanakalo SEO
Manangana ekipa iray mba hanaraha-maso ny SEO izay ampiasaina amin'ny fifaninanana. Hahita rohy hafa izay hahitanao bebe kokoa sy hanampy ireo tranonkala miresaka. Na izany aza, ireo nomerika ireo dia nahazoana alalana, nampidirina tao amin'ny tranonkala izay nampifandraisinao tamin'ireo mpifaninana nifanakalozan-kevitra sy izay nandraiketany vola amin'ny mpanjifa.
Ampiasao ity. Raha toa ka mitady ny rohy ho an'ny mpividy aho dia hamantatra ny mpanjifa mifanaraka amin'ny fampiasana ny Semalt Analyzer. Ny 'Site Site Open' no ampiasaina mba hanamboarana ireo tranonkala rehetra mba hifaneraserana. Rehefa avy nikaroka an'io daty marina io aho, dia nanontany ahy mikasika ny fangatahana fifandraisana ary ny zava-drehetra izay ilaina mba hanatanterahana ny planina.
Jereo ny fifaninanana ara-tsosialy
Tokony hifanerasera amin'ny fampahalalam-baovao sosialy izay mamaritra ny tetik'asa fitantanana ny votoatiny. Io no fampiharana goavana antsoina hoe FollowerWonk izay mahatsara ny fanaraha-maso amin'ny Twitter ary ny pejinanao manokana mitsipaka Raha ny marina, ny fanarahan-dia dia afaka manadihady ny tenanao ianao, ny rivotra ary ny zavatra hafa izay tianao roa. Raha toa ka misy olona iray manokana izay manaraka anao sy manaraka anao, dia tsy misy azonao atao ao amin'ny tsenam-barotra ary ny olona iray dia ny mifamatotra no ampiasaina.
Misy fomba hafa ampiasain'ny Buzzmo amin'ny finday (sary, lahatsarin'ny bilaogy) mipetaka amin'ny sehatry ny media sosialy amin'ny anao. Ampiasao ity data ity mba hampiroborobo ny hevitra vaovao amin'ny pejy manokana an'ny media sosialy.
Raha te-hiditra amin'ny tranonkalan'ny tranonkalan'ny hafa ianao dia hahita izany amin'ny fomba mahomby. Tadiavo ny lahatsoratra ao amin'ny lisitry ny tranonkalanao, ataovy izay hahazoanao ny kitaponao ary tsindrio ny bokotra. Ahoana no nahatonga izany? Duurde het lang? Ny tanjona dia ny fisoratana anarana / vahaolana ary ny fanaraha-maso ny tranonkalan'ireo orinasa ireo. Ary afaka manara-maso ny mpanjifanao hitondrana ny orinasa ianao. Ny tranonkala Trustpilot dia afaka manampy amin'ny fampivoarana izany.
Aoka hividy ny varotra an-tserasera sy marketing ara-pifaneraserana amin'ny fifaninanana ho anao manokana. Ny fampiharana ny fifanarahana dia afaka mandefa ny vaovao farany amin'ny fanomezan-dàlana sy ny fampiroboroboana. Misy fomba hafa ahafahana mivezivezy amin'ny fidirana amin'ny Twitter amin'ny lahatsoratr'ireo mpifaninana amin'ny Google Alerts amin'ny fanavaozana ny vaovao rehetra. Izany dia miasa amin'ny fotoana tena izy.
Raha mihoatra ny habaka an-tserasera dia azo atao, dia misy ihany ny safidy an-tserasera. Ho an'ny mpampiasa, raha ny tokony ho izy dia natao ho an'ny fivoriana fivoriana, dia nametraka ny fanasokajiana olona iray mba hisorohana ny fisehoan-javatra eo amin'ny fiainanao. Inona no tokony hataonao amin'ny fifaninanana? Ampiasao izany vaovao izany sy ny fijerinao manokana mba hampiroboroboana Source .